China Kids Skisuit factory ary mpanamboatra | Senlai
Ny akanjo ski dia mety amin'ny hetsika ivelan'ny ankizy, ny varotra any amin'ny firenena eropeana, nalaza tamin'ny mpanjifa, ny lamba dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana eropeana.
Ny akanjo 1.Ski dia mety amin'ny hetsika ivelan'ny ankizy, ny varotra any amin'ny firenena eropeana, nalaza tamin'ny mpanjifa, ny lamba dia mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fiarovana ny tontolo iainana eropeana.
2.we manana ny ozinay manokana, ekipa endrika matihanina miaraka amin'ny mpiasa mahay, raisinay am-pitandremana ny antsipiriany rehetra, amin'ny fomba maro kokoa hahatratrarana ny takian'ny vahiny.
3.we nisafidy ny hampiasa fibre polyester 100%, feno ny landihazo ny fitaovana, 210 t, fonosana azo esorina, MAO ao am-bava sy soroka miaraka amina lahatsoratra taratra, zipper tsy misy rano sy bokotra vy, manana ny sary famantarana azy manokana amin'ny clasp.
4.Ny cuff sy ny tongotra dia manana endrika tsy manam-pahanginan'ny rivotra, manana tongotra ny tongotra ny tongotra. Torolàlana momba ny fanadiovana: esory ny volon'ondry volon'ondry alohan'ny hosasana, aza mampiasa lamba fotsy na lamba malefaka, afaka mampiasa ilay boaty fanamainana sy fanamainana (hatramin'ny 40 ℃) Avoahy haingana araka izay azo atao ny rivotra rehefa avy manasa, mba tsy handotoana, ny vy amin'ny hafanana ambany, tsy ny fanadiovana maina, tsy ny fisehoana tsara ihany fa ny vokadin'ny tantera-drano, rivotra ary mafana koa.
5.From lamba hatramin'ny asa, manana mpiasa manokana izahay hifehy tsara ny kalitao. Manantena izahay fa hisy fiaraha-miasa mandritra ny fotoana maharitra ary hahatratra ny tombotsoan'ny tsirairay. Tongasoa eto amintsika hividy ny vokatray.
Teo aloha: Ankizy Pu Raincoat